Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > ကချင် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်က မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေး တနိုင်ငံလုံး ဟောပြောမည်
ကချင် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်က မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေး တနိုင်ငံလုံး ဟောပြောမည်	ဖနိဒါ	| အင်္ဂါနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၅၅ မိနစ်	ချင်းမိုင်(မဇ္စျိမ) ။ ။ ကချင် နှစ်ခြင်း ခရစ်ယာန် အဖွဲ့ချုပ် KBC က တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး ဟောပြောပွဲ ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်နေကြောင်း KBC ၏ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် HIV/AIDS ရောဂါ ကာကွယ် တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်လုပ်ရှားမှုတွင် တာဝန်ယူနေသူ ဆရာအင်ခွမ်တန်ဂွန်း က ပြောသည်။ အစိုးရတပ်နှင့် ကချင်လွပ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူများနှင့်ရောင်းဝယ်သူများလည်း ပိုမိုများပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် KBC အသင်းတော်မှ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ “တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင် ဘယ်လို သုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ ခုတော့ တိုက်ပွဲဖြစ်လာတော့ ဒီ မူးဆေးဝါး သုံးစွဲတာ၊ရောင်းဝယ်တာတွေက မြို့ပေါ်ထိ ပိုများလာတာ လက်တွေ့ မြင်နေရလို့။ တိုက်ပွဲကြောင့် သေဆုံးသူတွေ ရှိနေချိန်နောက်ထပ် ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကြောင့် ပြန်ပြီး အဆက်ဆုံးရှုံးတာတွေ မဖြစ်စေဖို့ ကျနော်တို့ ဘာသာရေးကနေ တာဝန်ယူပြီးတော့ တိုက်ဖျက်ရမယ် ဆိုပြီး KBC ကနေ တာဝန်ယူလုပ်တာပါ” ဟု ဆရာ အင်ခွမ်တန်ဂွန်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဓမ္မဒေသနာ ဟောပြောခြင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်များတွင် မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခြင်းကြောင့် လူမျိုးရေး ပြုံးတီးမှုများ ရှိလာခြင်းများကို ဟောပြောခြင်း၊ သီချင်းများ သီဆိုခြင်းဖြင့် သက်သေခံခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲခဲ့သူ လူငယ်များ ကိုယ်တိုင် သက်သေခံခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များဖြင့် တနိုင်လုံးလုံး တရက်တည်း ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သူက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး ကာကွယ်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးမှာ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်များ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်၊ ဘာသာဝင်တိုင်း ကျန်းမာသော သန်စွမ်းသူများ ဖြစ်လာရေးတို့အတွက် ရည်ရွယ်၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ “အရင်က KBC လူငယ်တွေက တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ငွေရေးကြေးရေး လိုအပ်ချက်တွေ၊ မိဘပြည်သူတွေလည်း စိတ်ဝင်စားမှု သိပ်မရှိကြဘူး။ ခုတော့ အားလုံးက တိုက်ဖျက်ဖို့ စိတ်ဝင်စား လာကြတယ်ဆိုတော့ KBC ကနေ ဦးဆောင်လိုက်တာပဲ” ဟု ဆက်ပြောသည်။ ဒေသပေါ် မူတည်ပြီး မူးယစ်ဆေးဝါးစိုက်ပျိုးမှု၊ သုံးစွဲသူနှင့် ရောင်းဝယ်သူများ ပိုမိုများပြားလာသည်ဟု ဆိုသည်။
Hpawt….. Ni ကချင်မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး ပညာပေးဇာတ်ကား သြဂုတ်လတွင် ပြသမည်	မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသ မူးယစ်မှုဖြင့် သံသယရှိသူ ၈၀၀ ကျော် ဖမ်းဆီးရမိထား	မူဆယ်မြို့နယ် အမျိုးသမီးများက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသူ ၃၀၀ ခန့် အရေးယူခဲ့	သုခရိပ်မြုံ HIV ကလေးငယ်များအတွက် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ ကျင်းပ	စစ်ပြေးဒုက္ခသည် TB နှင့် HIV ဝေဒနာသည်များ ဆေးဝါးလိုအပ်နေ	မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ် ဖမ်းရ မူးယစ်ဆေး ဖလှယ်ကြ	တရုတ် သင်္ဘောသား ၁၃ ဦး သတ်မှု နော်ခမ်း ဝန်ခံထွက်ဆို	Who is Online
We have 219 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved